Abakhiqizi be-PVC Compound - I-China PVC Compound Factory & abahlinzeki
I-UPVC Pipe Fitting Compound Granules
Amakhemikhali e-PVC aziwa nangokuthi inhlanganisela eyomile asuselwa enhlanganisweni ye-resin ye-PVC nezithasiselo ezinikeza ukwakheka okudingekayo ekusetshenzisweni kokuphela kokusetshenziswa. Umhlangano wokuqopha ukugxilwa okufakiwe kusekelwe ezingxenyeni eziyikhulu ze-PVC resin (PHR). Amakhemikhali e-PVC angenzelwa izinto eziguquguqukayo kusetshenziswa i-plasticizer, ebizwa nge-PVC Plasticized Compounds kanye nokusetshenziswa okuqinile ngaphandle kwe-plasticizer ebizwa nge-UPVC compound. Ngenxa yekhwalithi yayo enhle, eqinile futhi efanelekile ...
Izinto ze-PVC Zokupakisha kwe-Shrink nefilimu Lokuphrinta Lable
Ifilimu le-PVC Shrink - Uhlobo lokugoqa lokuncipha olusetshenziselwa izinhlelo ezahlukahlukene. Njengokuthi, inyama entsha, izinkukhu, imifino, izincwadi, ukuvala amanzi amaminerali kanye namabhodlela emithi, iziphuzo, amakhemikhali ansuku zonke, imithi, ubhiya kanye namalebula njll. I-PVC imele iPolyvinyl chloride. IPolyvinyl chloride iyipulasitiki yesithathu ekhiqizwa kakhulu emhlabeni. Kunezinhlobo ezimbili zamafilimu e-PVC: Ibanga Ukuphrinta Ibanga Kufanelekile ukukhiqiza noma ukuphrinta imikhono yokuncipha namalebula. Le filimu ye-PVC icacile, inzima ...
Amakhebula e-Cable PVC yizinto ze-thermoplastic ezisuselwa ekucubunguleni izingoma ze-polyvinyl chloride, ezikhiqizwa njengama-granules. Izakhiwo ezahlukahlukene zinikezwa amakhemikhali ngokuya ngezinhlelo zokusebenza nezimo zokusebenza kwento. Ama-granules we-Cable PVC asetshenziswa embonini yekhebula neyomqhubi ekwakheni ukwahlukanisa kanye nocingo oluvikelayo kanye nejacket yekhebula le-cable. I-PVC General Sheathing Grade Compound yenziwa kusetshenziswa izinto zokuqala ezingasetshenzisiwe ze-virgin virgin PVC, ngokuvumelana ngokuqinile ne-RoHS (Heav ...